Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Glaucoma မျက်စိ ရေတိမ်
Mon, Jul 23, 2012 at 9:17 AM
ကျွန်မက အခု (့) နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ အသက်က ၄၁ နှစ်ပါ။ အလုပ်က ကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီး ပုံတွေ ဆွဲရတာပါ။ တနေ့လုံး ကွန်ပျူတာ သုံးနေရပါတယ်။ ရောက်စက ညာဘက်မျက်စိမှာ အဖြူစက်တွေတွေ့လို့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘယ်ဘက်ကိုဖုံးထားပြီး ညာဘက် တဖက်တည်း ကြည့်ရင် အရှေ့မှာ အလွှာပါးပါး တစ်ခု ကာထားသလိုဖြစ်ပြီး ဝါးနေပါတယ်။
အဲဒါ မျက်ကြည်လွှာမှာ အမာရွတ်ရှိနေလို့ဖြစ်တာဆိုပြီး မျက်စဉ်းတွေ ပေးပါတယ်။ အမြဲသွားပြပြီး စစ်ဆေးနေရပါတယ်။ မျက်လုံးကလည်း တဖြေးဖြေး သက်သာလာပြီး ပုံမှန်ဘဲ ပြန်မြင်လာပါတယ်။ မျက်စဉ်းကို လိုအပ်သလို အတိုး-အလျော့ လုပ်သွားပြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမာရွတ်ဆိုတာကို ပျောက်ဖို့ဆိုရင် မျက်ကြည်လွှာ အစားထိုးမှ ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သက်သာလာပြီး အမြင်အာရုံကို အနှောင့်အယှက် မပေးဘူးဆိုတော့ မျက်စဉ်းဘဲ အမြဲခပ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးက ဝါးလာလို့ ဘယ်ဘက်ကိုပါ မျက်စဉ်း ခပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ကတော့ ဘယ်ဘက်က အရမ်းဝါးလာပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကိုတောင် ကြည့်ရင် အရမ်း ဝါးနေလို့ အလုပ်လဲ မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာဝန်ဆီသွားပါတယ်။ မျက်စဉ်းအသစ် တမျိုး ထပ်ပေးပါတယ်။
အဲဒီ မျက်စဉ်း ခပ်တာလဲ မသက်သာခဲ့တော့ ဇွန်လ ၁၈ရက်နေ့မှာ Consultant တစ်ယောက်နဲ့ သွားပြပါတယ်။ စစ်လိုက်တော့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာ Cataract ရှိနေလို့ ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ Eye pressure အရမ်း များနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မျက်စဉ်းအသစ်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ Eye pressure ကို အရင်ကျအောင် လုပ်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မျက်စဉ်းအသစ်တွေ သုံးနေပြီး တပတ်အကြာမှာ Eye pressure လဲ ပုံမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှာ Left eye cataract surgery လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ခွဲပြီးတော့ ကွန်ပျူတာကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စာလည်း ဖတ်လို့ မြင်နေရပါပြီ။ နှစ်ဘက်လုံးမှာ Glaucoma ရှိနေလို့ မျက်စဉ်းကိုတော့ ဆက်ပြီး ခပ်သွားရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အမာရွတ်က ပျောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ သူ့ကြောင့် ဖြစ်လာမဲ့ မျက်လုံးခြောက်တာကို မျက်စဉ်းခပ်ပြီး ထိန်းရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
(၁) ကျွန်မမျက်လုံးမှာ အဲဒီိလိုကိစ္စတွေရှိနေတော့ အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို တနေ့လုံးသုံးနေရတဲ့ အလုပ်ကို ဆက်ပြီးလုပ်သင့်ပါသလား။ ဆက်ပြီးလုပ်နေရင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပါသလား။
(၂) Glaucoma ကရော ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာပါလဲ။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုကုသမှ ပျောက်မှာလဲ။ မျက်စဉ်း အမြဲ ခပ်သွားရမယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ အဲလို မျက်စဉ်းအမြဲခပ်သွားရင်ရော Glaucoma ကို ပိုမဆိုးအောင် ထိန်းနိုင်လို့လား။ Glaucoma ဆိုတာ ကုလို့ပျောက်တဲ့ ရောဂါလားဆိုတာသိချင်လို့ပါ။
(၃) Cataract ဆိုတာရော ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲ။ ကြားဖူးတာတော့ တစ်ဖက်ဖြစ်ပြီးရင် နောက်တဖက်လည်း ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒါရော ဟုတ်ပါသလား။ ညာဘက်မှာပါထပ်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေလို့ပါ။
(၄) ညာဘက်မျက်လုံးမှာ ရှိနေတဲ့ scar ကိုရော ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲ။ မျက်စဉ်းအမြဲခပ်သွားရမှာလား။
(၅) ပြီးတော့ မျက်စဉ်း ကြာရှည်စွဲခပ်ရင် တိမ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလား။
(၆) မျက်လုံးရောဂါရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်က ကျွန်မသုံးနေတဲ့ မျက်စဉ်းကိုယူခပ်ရင် သူ့ရဲ့မျက်လုံးရောဂါ ကျွန်မကို ကူးနိုင်ပါသလား။
အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်မျက်စိအခြေအနေကို နောက်ဆုံးကုသပေးတဲ့ မျက်စိ အထူးကုဆရာဝန်က အကောင်းဆုံး အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်မှု တချို့နဲ့ အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ဆရာအနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။ Glaucoma ရေတိမ်အကြောင်း သပ်သပ် မရေးဖြစ်သေးလို့ ရေးပါမယ်။ မျက်စိမှာ အရည်ထွက်လမ်း ကျဉ်းတာ-ပိတ်တာကြောင့် ဖိအားများနေတယ်။ မျက်စိကို ထိခိုက်လာတယ်။ ဒေါင့်ကျဉ်းအမျိုး၊ ဒေါင့်ကျယ်အမျိုးလို့ ရှိတယ်။ တချို့က ချက်ချင်းခွဲရတယ်။ တချို့က မျက်စဉ်းနဲ့ သက်သာနေအုံးမယ်။
Cataract အတွင်းတိမ် ကလဲ အကြောင်းမျိုးစုံကနေဖြစ်စေတယ်။ လူတွေ အသက်ရရင်ဖြစ်ကြတာများတယ်။ အိုနာသဘောလဲ ပါတယ်။ Scar အမာရွတ်ဆိုတာ ထိခိုက်မှုကနေဖြစ်တယ်။ မျက်ကြည်လွှာမှာဖြစ်တာကို အပြင်တိမ်လို့ခေါ်တယ်။ တခုခုကွယ်ထားသလိုနေမယ်။ အမာရွတ်သပ်သပ်ကို ထုတ်လို့၊ ရှင်းလို့မရတာမို့ Cornea မျက်ကြည်လွှာ တခုလုံး အစားထိုးရတယ်။
တိမ်ဖြစ်စေမဲ့ မျက်စဉ်းဆိုရင် ဆရာဝန်က ပေးမှာမဟုတ်ပါ။ ကူးစက်တယ်ဆိုတာ ရောဂါပိုးကသာဖြစ်စေတယ်။ အတွင်းတိမ်၊ အပြင်တိမ်၊ မျက်ကြည်လွှာ အမာရွတ်တွေက ပိုးနဲ့မဆိုင်ပါ။ မျက်စဉ်းဆိုတာလဲ အမျိုးမျိုးရှိလို့ ဘယ်မျက်စဉ်းလဲသိဘို့ လိုပေးပါတယ်။ မျက်စိနာအတွက်သုံးတာကို နောက်တယောက်ခပ်ရင် ကူးနိုင်ခြေ ရှိတယ်။
WHO အဆိုအရ တကမ္ဘာလုံးဆိုရင် မျက်စိကွယ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ဒုတိယလိုက်တယ်။ ပဌမက Cataracts အတွင်းတိမ် ဖြစ်တယ်။ မျက်စိရေတိမ်ကို "တိတ်တိတ်လေး အမြင်စွမ်းကို အခိုးခံနေရတယ်" လို့ တင်စားကြတယ်။ မျက်စိရောဂါတွေထဲမှာ အရေးကြီးရောဂါတခုဖြစ်တယ်။ မျက်စိအတွင်းထဲမှာ ဖိအားသက်ရောက်တာ ခံနေရတယ်။ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စနစ်တကျကုသမှု မလုပ်ရင် အမြင်အာရုံကြောကို ထိခိုက်ရာကနေ မြင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေမယ်။ အစပိုင်းမှာ ဘေးပိုင်းအမြင် အားနည်တာဖြစ်စေမယ်။ နောက်ဆုံး မျက်စိကွယ်မယ်။
Types of Glaucoma ရေတိမ်အမျိုးအစားတွေ
(၁) Primary open-angle glaucoma ဆိုရင် အရည်ထွက်လမ်း လုံးဝပိတ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ Trabecular meshwork ဆိုတာလေး တစိတ်တပိုင်း ပိတ်နေတယ်။ တဖြေးဖြေးချင်း မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး မှုံလာတယ်။ အသက်ကြီးထာရင် Tunnel vision ဖြစ်လာမယ်။
(၂) Acute angle-closure glaucoma ဆိုရင် မျက်စိအတင်းနာမယ်။ ပျို့-အန်မယ်။ ရုတ်တရက် မျက်စိမှုံလာမယ်။ အဝိုင်းကွင်းတွေ မြင်နေရမယ်။ မျက်စိနီနေမယ်။ Iris သူငယ်အိမ်ကြွက်သား ရှေ့ဖက်ကို ဖေါင်းတာတယ်။ ကြာတော့ Aqueous fluid အရည်က Trabecular meshwork ဆီ မရောက်နိုင်တော့ဘူး။ ရုတ်တရက်လဲဖြစ်သလို ဖြေးဖြေးချင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒေါင့်ကျဉ်းနေသူမှာ သူငယ်အိမ်ကျယ်လာရင် Acute angle-closure glaucoma ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အမှောင်ထဲ ဝင်လိုက်ချိန်မျိုး၊ စိတ်ဖိအားများတာမျိုး၊ စိတ်လှုတ်ရှားမှု များတာမျိုး၊ ဆေးတချို့ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ Desloratadine (Clarinex), Cetirizine (Zyrtec), Doxepin, Protriptyline (Vivactil), Atropine eyedrops
Complications နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တာတွေ -
Tests and diagnosis စမ်းသပ်နည်းတွေ
အရေးကြီးတဲ့ ရောဂါတွေကို လူနာလာမှ ဆေးကုပေးတာမျိုး တင်မကဘဲ Screening ခေါ်တဲ့ လူအများကို ဆန်ကာတင် စစ်နည်းနဲ့ လုပ်ရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မျက်စိစစ်ရင် Tonometer ကရိယာသုံးတယ်။ IOP မျက်စိထဲက ဖိအားကို တိုင်းတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် IOP က 21 mmHg ထက်နည်းရတယ်။ 30 mmHg ထက်များနေရင် မျက်စိကွယ်ဘို့ ကောင်းနေသူတွေ 15 mmHg သာရှိနေသူတွေထက် အဆ ၄ဝ များနေပြီ။
Glaucoma Treatments မျက်စိ-ရေတိမ်ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ
နည်း (၃) နည်းသုံးတယ်။ မျက်စဉ်း နဲ့ ဆေးတွဲပေးတာဟာ IOP ကျအောင် လုပ်တာဖြစ်တယ်။ နာတာမရှိတော့ မျက်စဉ်း ခပ်ဘို့ ပေါ့ဆတတ်တယ်။
1. Eyedrops မျက်စဉ်း
• Prostaglandin-like compounds = Latanoprost (Xalatan) and Bimatoprost (Lumigan) တွေသုံးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = မျက်စိနဲနဲနီမယ်၊ သူငယ်အိမ်ပိုနက်မယ်။ မျက်ခံအမှော ရောင်ချယ်ပိုများမယ်။ မျက်စိ သိပ်ကြည့်မကောင်း ဖြစ်မယ်။ အမြင်လွှာရောင်မယ်။
• Beta blockers = Timolol (Betimol, Timoptic), Betaxolol (Betoptic) and Metipranolol (Optipranolol) တွေ သုံးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = အသက်ရှူခက်မယ်။ နှလုံးခုန်နှေးမယ်။ ဆံပင်ကျွတ်မယ်။ သွေးဖိအား ကျမယ်။ ကျား-အင်္ဂါသန်မှု နည်းမယ်။ အားယုတ်မယ်။ စိတ်ကျမယ်။ မှန်ဥာဏ်လျှော့မယ်။ ပန်းနာရှိသူ၊ အသက်ရှူလမ်းရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချိုရှိသူတွေကို သတိနဲ့သာပေးတယ်။
• Carbonic anhydrase inhibitors = Dorzolamide (Trusopt) and Brinzolamide (Azopt) တွေ သုံးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ဆီးခဏခဏသွား၊ ခြေ-လက်ကျင်။
• Miotic or cholinergic agents = Pilocarpine (Isopto Carpine) and Carbachol (Isopto Carbachol) တွေ သုံးတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = မျက်စိနေရာနာ၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ နှာစေသလိုဖြစ်၊ တံတွေးများ၊ အစာမကျေ။
2. Oral medications စားဆေးတွေ
Eyedrops မျက်စဉ်တခုတည်းနဲ့မရရင် သောက်ဆေးပေးမယ်။ Carbonic anhydrase inhibitor ဆေးကို အစာနဲ့ တွဲသောက်ရတယ်။
3. Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်း
Lifestyle and home remedies အိမ်မှာ ဘယ်လိုနေမလဲ
Posted by Dr. Tint Swe at 1:56 PM